ဤလမ်းမှားယွင်းနေသောအရာ Martech Zone
Parallels 3.0 နှင့် OSX Leopard ဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ MacBookPro တွင် Run မည့် Vista ၏ဖန်သားပြင်သည်။
Tags: android ဖုန်းပန်းသီးခရစ်စမတ်ကတ်များဧည့်ဝန်ဆောင်မှုဂိမ်းကြော်ငြာမိုဘိုင်းကြော်ငြာပလက်ဖောင်းမိုဘိုင်း app ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှုဖွဲ့စည်းပုံ
မတ်လ 11, 2008 မှာ 4: 32 pm တွင်
Doug !!!!!! သငျသညျ DARK အရပ်သို့သွားကြသည် !!!!! 😉
မတ်လ 11, 2008 မှာ 8: 57 pm တွင်
မင်းရဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကနေဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုထဲမှာထည့်ရမယ်။ (Macbeth သည်ငါပြောသောမကောင်းသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ )
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ Aero Glass သည် VM ပတ်ဝန်းကျင်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်သံသယရှိသည်။ ကျွန်ုပ်မှားလျှင်ကျွန်ုပ်ကိုပြင်ပေးပါ။
မတ်လ 11, 2008 မှာ 9: 28 pm တွင်
Parallels ကယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် Aero ကိုအထောက်အပံ့ပေးမည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်။ အခုအဘို့အဘယ်သူမျှမသွားပါ။
မတ်လ 12, 2008 မှာ 9: 44 AM
အဘယ်ကြောင့်ကြောက်မက်ဘွယ်သောစက်ယန္တရားနှင့် ပတ်သတ်၍ သင်၏ကောင်းသောငြိမ်းချမ်းရေးစက်ယန္တရားကိုအသရေပျက်စေသနည်း။ !?!
ငါ Parallels နှင့်အတူ XP ရှိခဲ့
မတ်လ 12, 2008 မှာ 10: 04 AM
ငါ Vista ကို Windows 3.11, Windows 95 နဲ့ Windows ME တို့မှာကြိုက်တယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ me ငါ့ကိုသစ္စာဖောက်လို့ခေါ်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါတကယ် Vista ကိုကြိုက်တယ်၊ ငါတို့သားရဲ့အကြီးမားဆုံးစနစ်မှာလည်ပတ်နေပြီး Aero ကကောင်းတယ်။ OS ကတော့ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာပြissueနာမရှိခဲ့ပါဘူး။
မတ်လ 12, 2008 မှာ 11: 44 AM
Vista မှာပြwithနာမရှိခဲ့ဘူး။ ပျော့ပျောင်းတာတွေဘာတွေရှိလဲဆိုတာငါမသိဘူး
မတ်လ 13, 2008 မှာ 8: 36 pm တွင်
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်က Windows XP ကိုကျွန်တော်မနှောင့်ယှက်တော့ပါ။ ဒါဟာသာရိုးရှင်းတဲ့ပြင်ဆင်ချက်ကိုယူ။ , ပါဝါ plug ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်တစ်ထောင့်ရှိရုပ်ဆိုးမီးခိုးရောင် box ကိုပုန်းအောင်း။ အမှောင်ထု၊
x-mas မတိုင်ခင်လေးမှာ Window ပေါ်မှာပဲအလုပ်လုပ်တဲ့ program တစ်ခုကိုကျွန်တော်တကယ်ပဲကြိုးစားချင်ခဲ့တယ်။ WinXP ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန် ၈ နာရီခန့်အမှားပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်သည်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကူးမရှိသောပရိုဂရမ် interface နှင့်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးကိုစွန့်လွှတ်ပြီးအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သည့် Mac ပရိုဂရမ်အတွက်ပိုမိုကြီးမားသောငွေပမာဏကိုပျော်ရွှင်စွာပေးဆပ်ခဲ့သည်။
မတ်လ 13, 2008 မှာ 8: 44 pm တွင်
အိုး, မှား link ကို။ ငါစေလွှတ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။